Iray amin’ireo mpanakanto andrimbavilanitra nitondra endrika vaovao teo amin’ny mozika malagasy. Mankalaza ny 30 taona nidirana teo amin’ny sehatry ny mozika i Bodo, ary hanolotra seho goavana ny 30 septambra izao etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena …Tohiny
Fikambanana miorina etsy Ampefiloha Cité, ary manana tanjona amin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy. Ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasan’izy ireo dia hanolotra hetsika ho fitadiavam-bola ny fikambanana ny sabotsy 1 septambra izao etsy amin’ny Kudeta Anosy. …Tohiny
Hitondra an-tsehatra ny « Lavitra ahy » i Faniah Mbola manohy hatrany ny fampahafantarana ny rakikira vaovao « Lavitra ahy » i Faniah. Etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray no hitondrany an-tsehatra io rakikira io …Tohiny
Miisa 9 913 599 ireo mpifidy tafiditra anatin’ny lisitra, amin’ny fifidianana fihodinana voalohany ny 7 novambra ho avy izao. Io no isa ofisialy navoakan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, taorian’ ny fanamarinana sy fampidirana …Tohiny